सामाजिक सञ्जालमा धराने सुन्दरीको फिगरको चर्चा ! हेराैँ फोटो-भिडियो – Taja Khawar
सामाजिक सञ्जालमा धराने सुन्दरीको फिगरको चर्चा ! हेराैँ फोटो-भिडियो
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १८, २०७८ समय: १:२६:०४
सामाजिक सञ्जाल अहिले धेरै युवायुवतीका लागि अपरिहार्य साधन भएको छ । समय विताउन सामाजिक सञ्जाल एउटा सजिलो माध्यम भएको छ । कतिपय युवायुवती एकाएक भाइरल र चर्चित हुने गरेका छन् ।
धरानकी एक जना सुन्दर युवती । सामाजिक सञ्जालमा उनको फिगरको निकै चर्चा छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृय छन् ।
सामाजिक सञ्जालले उनलाई निकै चर्चित बनायो । उनको फिगरले धेरैलाई लोभ्याएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक टिप्पणी आउने गरेको भन्दै उनले आलोचना गर्नेहरुलाई आफुले कुनै वास्ता नगर्ने बताउँछिन् । उनी राम्रो कलाकार बन्न चाहन्छिन् ।
मलाई धेरैले फर्म लगाएको हो भन्छन्, मेरो नेचुरल फिगरलाई फर्म लगाएको हो भन्दा चित्त दुख्छ नी उनले भनिन् । कसैले तिम्रो परिवारमा बुवा आमा छैनन् किन यस्तो भिडियो हाल्छौ ? भनेर पनि लेख्छन् उनले अगाडी भनिन् मलाई यस्ता कुराले केही फरक पार्दैन । सामाजिक सञ्जालमा लिम्बुनी बुढी भनेर धेरैले चिन्छन् ।
Last Updated on: August 2nd, 2021 at 1:28 am